လက်ပန်းတောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » လက်ပန်းတောင်း
Posted by nigimi77 on Dec 2, 2012 in Opinions & Discussion, Think Different | 16 comments
စဉ်းစားကြည့်စေလိုပါတယ် (C.D to F.R)
င်္FR ရဲ့စဉ်စားကြစေလိုပါတယ် ဆိုတာကို ဒီနေရာမှာ ငှားသုံးချင်ပါတယ် ။
အမြင်တွေကတော့ မတူနိုင်ဘူးပေါ့ ။ မတူသော်လည်းပဲ စဉ်းစားလို့ ရအောင်
ဆရာ တင်လတ် ရဲ့Wall ပေါ်ကနေ ကူးယူပြီး မျှဝေလိုက်ပါတယ် ။
ဆဲချင်ကြလဲ အားလုံးဝိုင်း ဆဲကြဗျာ။ ဒီပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ၂နှစ်သားဒီမိုကရေစီ မရင့်ကျက်သေးကြောင်း၊ ကလေးအဆင့်ပဲရှိသေးကြောင်းကမ္ဘာကိုပြလိုက်တာပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီကိစ္စမှာ သုံးဘက်လုံးမှားတယ်ယူဆပါတယ်၊ လက်ရှိအစိုးရဟာ အရင်အစိုးရလက်ထက်က အထုပ်တွေကို လက်ဆင့်ကမ်းကာကွယ်နေတာ ရပ်သင့်ပါပြီ၊ ဒေသခံတွေအတွက် ထည့်သွင်း စဉ်းစားထားခြင်းမရှိတဲ့ Project မှန်သမျှ ပြန်သုံးသပ်ပြီး Revise လုပ်သင့်ပါပြီ၊ မြန်မာနိုင်ငံ သည် S…overeign State ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ နိုင်ငံအကျိုး၊ လူထုအကျိုး အတွက် မှန်ကန်စွာ Revise လုပ်ခြင်းကို ဘယ်နိုင်ငံမှ အပြစ်ပြောလို့မရပါ၊ Investor ဆိုတာ မတောင်းရင်တော့ အလိုလိုပေးမှာ မဟုတ်ပါ၊ မပေးလို့မရတဲ့ ဥပဒေ စည်းမျည်း ရှိလျှင် ပေးကြမှာပါ၊ လက်တင် အမေရိကက Belize နိုင်ငံဟာ မဟော်ဂနီသစ် ကောင်းထွက် လို့ နာမည်ကြီးပါတယ်၊ သူ့ဆီမှာ သစ်ခုတ်ခြင်ရင် ခုတ်တဲ့ အပင် အရေအတွက် အတိုင်း အစားထိုးပြန်စိုက် ပြီး ရှင်ပြီ သေချာမှ သစ်ပေးခုတ်ပါတယ်၊ ဒါ့အပြင် သစ်အလုံးလိုက် ပေးမပို့ပါဘူး၊ အချောထည်စက်ရုံများထောင်ခိုင်းပြီး အချောထည်များပဲ Export ပေးပါတယ်၊ တချက်ခုတ်သုံချက်ပြတ်ပေါ့၊ Investor တွေက လိုချင်တော့လာရတာပဲ၊ Investor ဆိုတာ လွယ်ရင်တော့လုပ်မှာပဲ၊ မလွယ်လဲလာလုပ်ကြတာပါပဲ၊ နဲနဲမြတ်တာနဲ့ များများမြတ်တာပဲကွာတာကိုး၊ မလွယ် ရင် လူသန့်သွားပါတယ်၊ နောက်တခု Pacific Ocean ထဲက Nauru ဆိုတဲ့ကျွန်းနိုင်ငံသေးသေးလေး၊ ၈မိုင်ပါတ်လည်ပဲရှိတယ်၊ လူဦးရေက ၁သောင်းမပြည့်ဘူး၊ ဖော့စဖိတ်ထွက်တယ်၊ ကိုလိုနီတွေရဲ့ ခေါင်းပုံဖြတ်တာာ တသက်လုံးခံခဲ့ရတယ်၊ ဩစတျေးလျား အဓိကပေါ့၊ လွတ်လပ်ရေးလဲရရော၊ ၊ ဖော့စဖိတ် တဝက်ကျော်ကုန်ပြီ၊၊ကျွန်းလဲရစရာမရှိတော့ဘူး၊ အဲဒီမှာ ဩစတျေးလျားကို တရားစွဲတာ နိုင်သွားတော့ ဩစတျေးလျားက ကျွန်းသားတိုင်းကို တလ AUD ၂၅၀၀ ထောက်ပံ့ရတယ်၊ Nauru ကျွန်းသားတွေ ဩစတျေးလျားမှာနေချင်ရင် PR တန်းပေးရတယ်၊ ခုချိန်မှာ Pacific Island တွေထဲမှာ တဦးချင်းဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးပဲ၊ သူ့ဆီမှာ ဖော့စဖိတ်တူးချင်ရင် ကျွန်းသားတွေအတွက် ရန်ပုံငွေထူပေးရတယ်၊ ဖော့စဖိတ်ကုန်သွားရင် ကမ္ဘာ တည်သရွေ့စားလောက်အောင်၊ ဒါလဲလာတူးကြတာပဲ၊ အရင်တုံးကတော့ကျွန်တော်တို့မမာနိုင်ဘူး၊ Sanctions တွေကြောင့်၊ အခုမာလို့ရပြီ၊ မြန်မာ့ကျွန်း၊ ကျောက်စိမ်း၊ ပတ္တမြား၊ ကြေးနီ၊ စသည်ဖြင့် ကမ္ထာ မှာနာမည်ကြီးတယ်၊ မြန်မာကရတာအနဲဆုံးပဲ၊ ကြားပွဲစားနဲ့ ဝိသမ Investor တွေကပိုရနေတယ်၊ ခုကြေးနီကိစ္စ အစိုးရက တရုပ်ကုမ္ပဏီကို Agreement Revise ပြန်လုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်၊ Revise လုပ်တာနဲ့ Cancel လုပ်တာမတူပါ၊ ဒေသခံတွေ အတွက် အကျိုးအမြတ်ကျေနပ်အောင်ခွဲပေးလိုက်ရင်ပြီးသွားမှာပါ၊ Environmental Rehabilitation ပါပါရပါမည်၊ ဆန္နပြတာကို အလွံအကျွံအင်အားသုံးဖြေရှင်းတာအလွန်မှားပါတယ်။
ဒေသခံတွေကကော?၊ စိးပွားဖြစ်လယ်စိုက်လို့မရတဲ့မြေကို ပိုက်ထားပြီး၊၊ကျားကျားမီးယပ်ပဲဆိုပြီး ကဏ္ဏကောဇ လုပ်နေဘို့မသင့်ပါ၊ မိမိလည်းသူဌေးမဖြစ်လောက်၊ နိုင်ငံတော်ပြည်သူလည်း အကျိုးအမြတ် မရအောင်လုပ်နေကြရင် ဒီတိုင်းပြည် ဘယ်လိုပိုက်ဆံရှာ တိုးတက်တော့မလဲ?၊ တိုက်ရတောင်းရမှာက၊၊ရလာမဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုထိုက်သင့်စွာရှယ်ပေးဘို့၊ လယ်မစိုက် တပိုင်ကြေးမချက်ပဲ နေထိုင်စားသောက်နိုင်ဘို့တောင်းရမှာပါ၊
နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကကော?၊ ပွဲဆူရင်ပြီးရော မြောက်မပေးသင့်ပါ၊ နိုင်ငံလည်းနာမည်ပျက်၊ လူတွေလဲနစ်နာပါတယ်၊ တိုင်းပြည်အတွက်၊လူထုအတွက်စေတနာထားရင်၊ ရှဉ့်လဲလျှောက်သာ ပျားလဲစွဲသာတဲ့ အဖြေကိုရအောင်ထုတ်ပြီး၊ အစိုးရကို Advocate လုပ် လူထုကို Educate လုပ်ရမှာ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့တာဝန်ပါ။
မှတ်ချက်၊ လက်ပံတောင်းတောင်ဖြစ်စဉ်တွင်၊ ထိခိုက်နစ်နာသူ အားလုံး အတွက် ကာယကံရှင်၊ မိသားစု များနည်းတူ အလွန်ဝမ်းနဲပါကြောင်း၊
By Wanna More
နိုင်ငံရဲ့စီမံကိန်းတွေ က နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ပြည်သူတွေကသာ ဒီစီမံကိန်းကို ရပ်ပေးပါ ရပ်ပေးပါ လို့ အော်နေကြတာ နိုင်ငံမှာ ကြွေးမီတွေက အရမ်း များနေပါတယ်။ အဲဒီ ကြွေးမီတွေကို ဘယ်သူ ဆပ်ပေးမှာလဲ… ပြည်သူတွေဆီက ပိုက်ဆံတောင်းပြီး ဆပ်ပေးမှာလား… စီမံကိန်းတစ်ခု ကို (အရင်အစိုးရက) လက်မှတ်ထိုးတဲ့ အခါ ဒီစီမံကိန်း မဖြစ်ရင် လျော်ကြေးဘယ်လောက် ဘယ်လောက် ပေးရမယ်ဆိုပြီး ထည့်ချုပ်ပြီးသားပါ၊ မြစ်ဆုံ ကိစ္စ တုံးကလည်း ကြားဖူးတာက မြစ်ဆုံစီမံကိန်းရဲ့ တန်ကြေးတင် ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံ တန်တယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။ လျော်ကြေးမဟုတ်သေးဘူးနော်.. တန်ကြေးပဲ ရှိသေးတယ်။ လုံးဝ ရပ်ဆိုင်းလိုက်တာနဲ့ လျော်ပေတော့ပဲ…။ ဒါပေမယ် မြစ်ဆုံက တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ အသက်သွေး ဖြစ်တဲ့ အတွက် လျော်ရရင်တောင် တန်ပါသေးတယ်။ နိုင်ငံ တစ်ခုလုံးမှာ ရှိတဲ့ ယခု စီမံကိန်းလို မျိုးတွေ အားလုံးကို ရပ်ရမယ် ဆိုရင် လျော်ရမယ့် လျော်ကြေးက ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာ မခန့် မှန်းနိုင်ပါဘူး။ အရင် (ချီးထုပ်) အစိုးရ က လက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်ဆိုတာလည်း ဦးသန်းရွှေ ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ ထိုးတာမဟုတ်ပါဘူး၊ နိုင်ငံ့ ခေါင်းဆောင် အနေနဲ့ ထိုးတာပါ အဲဒါကြောင့် စီမံကိန်း အားလုံးဟာ အစိုးရ ဘယ်နှစ်ဆက်ပြောင်းပြောင်း နိုင်ငံရဲ့အမွေ ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒါတွေအားလုံးကို လျော်ဖို့ ဘယ်က ပိုက်ဆံရပြီး ဘယ်လို ဆပ်ကြမှာလဲ… နိုင်ငံရဲ့အခွန်တော်ကို ထမ်းဆောင်နေတဲ့ လူဟာ နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ လူဦးရေ ရဲ့၁% ခန့် ပဲ ရှိတယ်လို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ အဓိက ရတဲ့ ငွေဟာ အဲဒီ စီမံကိန်းတွေ ရောင်းစားတာနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေက ရတဲ့ ငွေ (ဥပမာ – စည်ပင်သာယာ) တွေနဲ့နိုင်ငံ့ အရင်းအမြစ်တွေ ကို ထုတ်ရောင်းတဲ့ ဆီက ရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ပဲ နိုင်ငံ ဆက်လက်ရပ်တည်နေရတာပါ။ ဘာလို့Complain တက်ရလဲဆိုတော့ အကို ပြောတာတဲ့ အားလုံးကို Revise လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ ကလည်း Cancel နဲ့ မတူတာမှန်ပါတယ်။ ဟိုဘက်ကရော လက်ခံဦးမှပါ။ လက်မခံရင် လျော်ပေရော့ပဲ… အဲဒါကြောင့် နိုင်ငံ အတွက် ဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားပေးကြပါ
By Pixie Lay
ဝေဖန်တာကျေးဇူးပါ၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့ Investment Project Agreement ချုပ်ဆိုတာနဲ့ပါတ်သက်ပြီးပြောရရင်၊ နိုင်ငံတော် အဆင့် ဘယ်စာချုပ်မှာမှ လျော်ကြေးဆိုတာမပါပါ၊ Government to Government (G to G), Government to Private/ Public (G to P) နုစ်မျိုးရှိရာမုာ၊ G to G project ကနဲပါတယ်၊ G to G မှာလဲ လျော်ကြေးဆိုတာမပါပါ၊ တရုတ်နဲ့က G to P တွေများပါတယ်၊ G to P မှာဘာပါလည်းဆိုတော့ Sovereign Guarantee ခေါ်တဲ့ Project ကို ပြည်သူပိုင် မသိမ်းပါဘူးဆိုတဲ့ အာမခံချက်နဲ့၊ ပြည်သူပိုင် သိမ်းခဲ့ရင် နစ်နာကြေး ပြန်ဖော်နိုင်အောင် ဗဟိုဘဏ်က State Bank Guarantee ထုတ်ပေးပါတယ်၊ တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ State Bank Guarantee က တန်ဘိုးအရှိဆုံး Guarantee တွေဖြစ်ပေမဲ့၊ Defacto အစိုးရ အုပ်ချုပ်ပြီး Sanction အောက်က Myanmar ရဲ့ Sovereign Guarantee နဲ့ State Bank Guarantee က ကမ္တာ့စာချုပ်စာတမ်းဈေးကွက်မှာ ငါးပြားမှမတန်ပါဘူး၊ နောက်ပြီးစာချုပ်တိုင်းမှာ Force Majeure ဆိုတာပါပါတယ်၊ Project လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံမှာ စစ်ဖြစ်ခဲ့ရင်၊ “ဆန္န ပြပွဲဖြစ်ခဲ့ရင်”၊ သဘာဝဘေးကျရောက်ခဲ့ရင်၊ အစိုးရ (သို့) Investor က Notice ပေးပြီး တဘက်သတ်ရပ်လို့ရပါတယ်၊ ဘာလျော်ကြေးမှပေးစရာမလိုဘူး၊ ဒါကြောင့် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက မြစ်ဆုံကို ဖျက်သိမ်း (ပြည်သူပိုင်သိမ်း) တယ် မပြောဘဲ ရပ်ဆိုင်းတယ်လို့ပြောတာပါ၊ Force Majeure ကိုသုံးတာပါ၊ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ရွှေ့ကွက်ပါ၊ ဒါကြောင့်တရုပ်တွေ ဘာမှလုပ်မရဘဲ ဟိုအော် ဒီအော် နဲ့ ပြန်ညှိမယ်လုပ်နေတာပါ၊ ဒီဥပမာကို ကြည့်ရင်၊ အစိုးရက Force Majeure သုံးပြီး Investor ကိုပြန်ညှိ ခိုင်းလို့ရကြောင်း ထင်ရှားပါတယ်၊ ကြေးနီတောင် ကိစ္စမှာ ကော်မရှင်ဖွဲ့တာ ပထမခြေလှမ်းပါ၊ မြစ်ဆုံတုံးက Without Notice လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် နောက်တခု ထပ်လုပ်ရင်မကောင်းတတ်လို့၊ ဆန္န ပြပွဲ နဲ့ ကော်မရှင်ကို ခေါင်းစဉ်တပ်၊ ဆင်ခြေဆင်လက် ပေးပြီး တရုတ်နဲ့ညှိ ဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ မယုံရင်ကြည့်ပါ တရုတ်က ပြန်ညှိ လာပါလိမ့်မယ်၊ Investor ဆိုတာ လျော်ကြေး လိုချင်တာမဟုတ်ပါ၊ စီးပွားရေးလုပ်ချင်လို့ အကျိုးအမြတ် များများရချင်လို့လာလုပ်တာပါ၊ ကြေးနီတောင် Investment Project Agreement ကို လူထုကြားချပြပြီး နားလည်သူများက တဖက်စောင်းနင်း ဖြစ်နေတဲ့ အချက်တွေပြင်၊ နှစ်ဘက်မျှတ အောင် ပြန်ရေး၊ ဒေသခံတွေ အတွက်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အတွက် အချက်တွေ ဖြည့်စွက် လိုက်ရင်၊ တရုတ် ငြင်းလို့မရပါဘူး၊ သူငြင်းရင် သူက စာချုပ်ဖောက်ဖျက်သူဖြစ်သွား ပါမယ်၊ အဲ စာချုပ်မှာ အဘ တို့အတွက် ပွဲခတွေ၊ ဆွေ ၇နှစ်ဆက် ပေးရမယ့်ကော်မရှင်တွေပါလို့ ချမပြရဲရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး ဗျာ၊
ဥပမာပေးရရင် တောင်အမေရိက ဗင်နီဇွဲလား သမ္မတ Hugo Chavez က American ကိုကြည့်မရတော့ American ရေနံကုမ္မဏီတွေ နဲ့ နိုင်ငံတော် အဆင့် စာချုပ်ထားတဲ့လုပ်ကွက်တွေ အားလုံးကို ဘလိုင်းကြီး ပြည်သူပိုင်သိမ်းပြီး မောင်းထုတ်၊ ငါးပြားမှ နစ်နာကြေးမပေးနိုင်ဘူးကွာ ဆိုပြီး ထုတ်ပေးထားတဲ့ Guarantee တွေအားလုံး Cancel လုပ် လိုက်တာ American တွေ ကက်ကက်လန်အောင် အော်ယုံ ပဲတတ်နိုင်တယ် ဘာမှ လုပ်လို့မရ၊ တကမ္တာလုံးက တရားရုံးတွေမှာ တရား ပတ်စွဲလဲ ဒီနေ့ထိ ငါးပြားမှ မရသေးပါ၊ သူကတော့ လူဆိုးပေါ့ဗျာ၊ ဒါပေမဲ့ Sovereign State ဆိုတာ လုပ်ချင်ရင် လုပ်လို့ရကြောင်း ပြောတာပါ၊ နောက်တော့ ကျွန်တ်ာတို့ဇာတ်လိုက် တရုတ်က ဗင်နီဇွဲလား ကိုပြေးပြီး လုပ်ကွက်တွေ အားလုံးကို Take Over လုပ်လိုက်တာပါ၊
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရမှာက နိုင်ငံတော်အဆင့် ကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီး ကြေးနီတောင် အပါအဝင် နိုင်ငံတော် အဆင့် စီမံကိန်း အားလုံးရဲ့ စာချုပ် တွေပြန်စိစစ် Investor တွေနဲ့ပြန်ညှိ ဖို့တောင်းဆိုရမှာပါ၊ စာချုပ် တွေ ဖျက်သိမ်းဖို့ကို အားမပေးပါ၊ အရင်စာချုပ်တွေပြန်ညှိ၊ နောက်လာမဲ့စာချုပ်တွေကို သေချာ စိစစ်ပြီး မသာမနာ ရအောင် အကြံပေးနိုင်တဲ့ တတ်သိပညာရှင်များ၊ နဲ့ပါ သင့်သူများပါတဲ့ Foreign Direct Investment Advisory ကော်မရှင်ကို မှန်ကန်စွာ ဖွဲ့နိုင်ရင် ပြည်တွင်းလဲ လေးစား၊ ပြည်ပလဲ လေးစားပြီး လက်ရှိပြသနာတွေ လဲပြေလည်၊ Investment အသစ်တွေလဲ ပိုပြီး ဝင်လာနိုင်ပါတယ်၊
ထစ်ကနဲရှိ တော်လှန်ဖို့ လုပ်တာ ဆန်ဒပြဖို့ လုပ်တာက ဖြေရှင်းနည်းတစ်မျိူး ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ အကြပ်အတည်းအတွက် အဲဒီဖြေရှင်းနည်းနဲ့ alternative solution ကို ဆွေးနွေးထားတာကို နှစ်သက်မိလို့ share ပါတယ်
Credit to Tin Latt
လောလောဆယ်ဆယ်အကြမ်းဖျဉ်းဖတ်ကြည့် တာ သုံးသပ်ချက်တွေ တော်တော်
ကောင်းပါတယ် ။ ပြန်လာခဲ့ ပါဦးမယ် နောက်လူတွေလည်းစောင့် ရင်းပေါ့။
ဒါနဲ့  ကိုရင်ပြန်ရောက်လာတာ ဝမ်းသာပါတယ် ။ဟိုတစ်လောက ကျောက်ဖြူမှာ
ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ သတင်းတွေကြားရတော့သတိယပါတယ် ။ဆုံစရာက ဂဇက်ပဲရှိတော့ ……..
သပြုသီးပိုစ့် တင်ပြီးကတည်းကပျောက်သွားတာထင်တယ် ။
အာဏာရှင်ရဲ့ မင်းသားမျက်နှာဖုံးကွာကျသွားပြီ။ ဒီကိစ္စ တော်တော်နဲ့ ပြီးဖို့မလွယ်ဘူး ဆက်ပြီးဂေါင်းမာနေ
– ဆန္နပြတာကို အလွံအကျွံအင်အားသုံးဖြေရှင်းတာအလွန်မှားပါတယ်။
– ဒေသခံတွေကကော?၊ စီးပွားဖြစ်လယ်စိုက်လို့မရတဲ့မြေကို ပိုက်ထားပြီး၊၊ကျားကျားမီးယပ်ပဲဆိုပြီး ကဏ္ဏကောဇ လုပ်နေဘို့မသင့်ပါ၊ မိမိလည်းသူဌေးမဖြစ်လောက်၊ နိုင်ငံတော်ပြည်သူလည်း အကျိုးအမြတ် မရအောင်လုပ်နေကြရင် ဒီတိုင်းပြည် ဘယ်လိုပိုက်ဆံရှာ တိုးတက်တော့မလဲ?၊ တိုက်ရတောင်းရမှာက ရလာမဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုထိုက်သင့်စွာရှယ်ပေးဘို့၊ လယ်မစိုက်တပိုင်ကြေးမချက်ပဲ နေထိုင်စားသောက်နိုင်ဘို့
?? သိချင်တာက တခြား တခြားသောကိစ္စတွေနဲ့ တခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေလာရင်ရော (ဥပမာ အမေရိကန် တို့ အော်ဇီတို့ ….. )
အရှေ့အနောက် ဖြစ်ပီးသမျှ ဖြစ်နေသမျှ ကိစ္စတွေထဲမှာ ဒီကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားဆုံးပဲ
ကျွန်မတို့ရဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ အဆင်ပြေအောင် နေတတ်ရမယ်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဆိုတာ တရုတ်နိုင်ငံတစ်ခုတည်းပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ အိန္ဒိယရှိတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရှိတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရှိတယ်။ လာအိုရှိတယ်။ ကျွန်မတို့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေအောင် နေတတ်ရမယ်။ အဲဒါဟာ နိုင်ငံကြီးတစ်ခုရဲ့ တာဝန်ပဲ။ နိုင်ငံကြီးတစ်ခုရဲ့ သိက္ခာပဲ။ အဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စတွေရှိရင် ညိနှိုင်းတိုင်ပင် ဖြေရှင်းရမယ်။ အဲလိုလုပ်မှ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ တင့်တင့်တယ်တယ်နဲ့ နေနိုင်မယ်။ နောက်တစ်ခုပြောမယ်နော်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ မတည့်လို့ ရွှေ့ပြောင်းပြီး နေလို့မရဘူး။ ဒါဟာ လုံးဝဖြစ်နိင်တဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါကတော့ ဘယ်လိုမှ ငြင်းလို့မရဘူး။ ဒီပြသနာကို ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာ ကျွန်မတို့ ပြည်သူပြည်သားတွေ မနစ်နာအောင်လည်း ဖြေရှင်းရမယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ နိုင်ငံအနေနဲ့ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်း ကျွန်မတို့ သေသေချာချာ သတ်မှတ်သွားရမယ်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ မတည့်လို့ ရွေ့ပြောင်းသွားလို့ မရပါဘူး။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် လင်မယားချင်းမတည့်တာကမှ ကွာရှင်းလို့ ရသေးတယ်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ မတည့်လို့ ဘယ်လိုမှ ပြောင်းလို့မရပါဘူး။ လက်တွေ့ကျကျ ကြည့်ရမယ်။ အဖြစ်ကို အဖြစ်အတိုင်း ရင်ဆိုင်ရမယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မုံရွာမြို့ အုန်းခြံရပ်ကွက်၊ ဇက်ဆိပ် သောင်ပြင်တွင် နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ နံနက် ၈နာရီခွဲအချိန်က ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်းမှ..
ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါ၊အစ္စရေးတွေ ဘယ်လောက်နိုင်ငံကိုချစ်ကြလည်းဆိုတာ ပြည်တွင်း/ပ မြန်မာတွေသိရအောင်ပါ။
အဲမြန်မာပြည်ကတော့ အမျိုးအချင်းချင်းတွေ သစ္စာဖေါက်တာဆိုတော့
ပထမဆုံး မောင်ကဏန်း ပြန်ပေါ်လာလို့ တကယ်ဘဲ ဝမ်းသာပါတယ်။
မယုံလဲ နေပါ။ အီးမေးပို့ ပြီး မေးမလားတောင် စဉ်းစားရင်း လက်က မရောက်လို့။ :hee:
Post ပါ အကြောင်းအရာကတော့ ဒေသခံတွေ ဖက်က ကြည့် လဲ သူတို့ နစ်နာနေတာတွေ မြင်ရတာမို့ သူတို့ ကိုလဲ မှားတယ် လို့ မဆိုချင်ပါ။
သူတို့ အကျိုးရှိစေဖို့အတွက်လဲ ဖန်တီးပေးခဲ့ရင် ဘယ်သူမှ ပြသနာမလုပ်လို့ ယုံပါတယ်။
အခုဟာက ငါတစ်ဘို့ ထဲ ကြည့်နေကြတဲ့ သူတွေ/ အကြောင်းတွေကို
အရင်က ဆို ဘာမှ လုပ်မရပေမဲ့ အခွင့်လဲရရော အတင်းတိုးထွက် ကြသလိုပါ။
စားသောက်နေနိုင်သူ အများစု ကတော့ ထစ်ကနဲ ရှိ ဆန္ဒပြနေ ကြတာကို အင်မတန် မျက်မုန်းကျိုး နေကြပုံပါဘဲ။
တကယ်တော့ သူတို့ နေရာက ဝင်ကြည့်လိုက်ရင် ကိုယ်သာဆို ဆိုပြီး တွေးလိုက်လို့ရပါတယ်။
ကိုယ့်အိမ်နားမှာ လေယာဉ်ကွင်းအကြီးကြီး လုပ်ဖို့ ဖြစ်လာရင် ဒါဟာ တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေး ဆိုပြီး လက်ခံကြမလား။
မလုပ်မဖြစ်လုပ်ရရင်လဲ သက်ဆိုင်သူတွေ က ဒေသခံ တွေ ကို ရလာမဲ့ အကျိုးကျေးဇူး များ ကို အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြ ရပါမယ်။
ဒီ Project ကြောင့် သူတို့ နစ်နာမှုတွေ ရှိရင်လဲ တန်ကြေးပေးရပါမယ်။
မဟုတ်ရင်တော့ အခုလို သိပ်ပြီး ကြောက်စရာ မလိုတော့တဲ့ အချိန်မှာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ရတာနဲ့ လုပ်ကြတာ မှားတော့မမှားပါဘူး။
အဲဒီ ကနေ ရသမျှ ကိုယ့်အိတ်ထဲ ထည့်သူတွေ ပြန်ပြီးပေးဆပ် ရမဲ့ အချိန်ဘဲ။
အလှည့်ကျ နွဲ့စရာ မလို ပါဘူး လို့ဘဲ ထင်ပါတယ်။
ကျွန်မသာ အဲဒီ ဒေသခံ ဆိုလဲ ဒီလိုအခါမှာ ရသင့်တာ တောင်းဆို မှာ အမှန်ဘဲ။
ဒါပေမဲ့ နည်းမှန်၊ လမ်းမှန် လေးနဲ့ ဦးဆောင်ပေးမဲ့သူတော့ လိုနေတယ်။
ဒီ အချက်က စဉ်စားစရာပါ
အစိုးရ က လက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်ဆိုတာလည်း ဦးသန်းရွှေ ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ ထိုးတာမဟုတ်ပါဘူး၊ နိုင်ငံ့ ခေါင်းဆောင် အနေနဲ့ ထိုးတာပါ အဲဒါကြောင့် စီမံကိန်း အားလုံးဟာ အစိုးရ ဘယ်နှစ်ဆက်ပြောင်းပြောင်း နိုင်ငံရဲ့အမွေ ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒါတွေအားလုံးကို လျော်ဖို့ ဘယ်က ပိုက်ဆံရပြီး ဘယ်လို ဆပ်ကြမှာလဲ… နိုင်ငံရဲ့အခွန်တော်ကို ထမ်းဆောင်နေတဲ့ လူဟာ နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ လူဦးရေ ရဲ့၁% ခန့် ပဲ ရှိတယ်လို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ အဓိက ရတဲ့ ငွေဟာ အဲဒီ စီမံကိန်းတွေ ရောင်းစားတာနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေက ရတဲ့ ငွေ (ဥပမာ – စည်ပင်သာယာ) တွေနဲ့နိုင်ငံ့ အရင်းအမြစ်တွေ ကို ထုတ်ရောင်းတဲ့ ဆီက ရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ပဲ နိုင်ငံ ဆက်လက်ရပ်တည်နေရတာပါ။
အရင်စစ်အစိုးရက.. လူထုဆီကအခွန်ကောက်ပြီး..ရငွေနဲ့လည်ပါတ်ခဲ့ရင်.. တရားဝင်ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့.. သယံဇာတရောင်းငွေ.. နိုင်ငံ့ အရင်းအမြစ်တွေ ကို ထုတ်ရောင်းတဲ့ ငွေတွေနဲ့ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ခဲ့တာ.
ဆိုတော့.. ဒီခေတ်မှာ.. ရော…
“အပ်ကနေ.. လေယဉ်ပျံအထိ.”.သူများနိုင်ငံက၀ယ်သုံးတဲ့.. မြန်မာအမျိုးကောင်းသားတွေက… အစိုးရကိုဆောင်ရမယ့်.. အခွန်ငွေကျတော့လည်း.. အပြည့်မဆောင်ချင်ကြပါဘူး..။
နိုင်ငံခြားထွက်ဖို့ပြင်နေသူတွေနဲ့.. ကုန်ထုတ်စွမ်းအားရှင်.. အင်အားနည်းမှနည်း..
လည်ပါတ်ငွေတွေကလည်း.. ခရိုနီတွေနဲ့.. ငွေအကြောင်းနားမလည်သူတွေလက်ထဲအများကြီး “မိ”နေတယ်..။
စီမံကိန်းနဲ့.. သယံဇာတထုတ်ယူတဲ့.. ငွေရပေါက်တွေလည်း.. အကုန်ဆန္ဒပြမယ်.. ဖျက်သိမ်းဆိုတာချည်းဖြစ်လာကြတယ်..
ကျန်နေတဲ့.. မိန်းမတွေနဲ့ကလေးတွေ.. သွေးတွေဖေါက်ရောင်းစားရင်း တိုင်းပြည်အကြွေးတွေဆပ်.. လည်ပါတ်ရမယ်ထင်တယ်နော..
ဟဲ ဟဲ ။ ဒီလိုလေး လုပ်ရင်တော့ ရမယ် ။
သယံဇာတ တွေလည်း မထိချင် ၊
သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်လည်း မထိချင်ကြရင် ၊
လူတိုင်း ဝင်ငွေရဲ့ ၃၀ % လောက်ကို ၊
ဝင်ငွေခွန် ကောက်လိုက်ရင်ကော ???
ယူအက်စ်မှာ.. . အမေရိကန်တွေဆောင်ရတာ…. ဘာခွန်.. ညာခွန်.. ဆိုရှယ်..အကုန်ပေါင်း.. ၀င်ငွေရဲ့.. ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်တယ်အဘဖောရေ့…။
Total tax percentage paid by the above average US citizen, 2005 – 54.4%
Total tax percentage paid by the above average US citizen, 2009 est. – 57.7%
အဲဒီနှုန်းထားတွေက တကယ်ဆောင်ရတဲ့ နှုန်းတွေမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ဘာစရိတ်စက ဟိုနှုတ်ဒီနှုတ်မှ မရှိရင် ပလိန်းဂျီးဆောင်ရမှာကိုပြောတာပါ။ ဒေါ်လာဘီလျံရာပေါင်းများစွာတန်တဲ့ အမေရိကန်ကုမ္မဏီ ဂျီအီးဆိုဘယ်နှယ်လုပ်မလဲ၊ မနှစ်က အမြတ်ငွေ ဘီလျံချီပြီး တပြားမှ အခွန်မဆောင်ခဲ့ရဘူး။ အစိုးရသတ်မှတ်ထားတဲ့ ပရောဂျက်တွေ သုတေသနအလုပ်တွေ ရေရှည်စီမံကိန်းတွေလုပ်ပြီး အခွန်ရှောင်ပြသွားတာ။ သူဌေးတွေများသောအားဖြင့် အခွန်ဆောင်ရတာ ဝင်ငွေနဲ့စာရင် သာမာန်လူထက် သက်သာပါတယ်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်ပြောတာ၊ အစောက ပြောသလို သူတို့မှာ အရှောင်အတိမ်း ဂျက်ဆီဂျိမ်းလုပ်ဖို့ ဂွင်တွေရှိတယ်။ လက်လုပ်လက်စား အလုပ်သမားလူတန်းစားကတော့ ဆောင်ပေရော့ပဲ။ သူတို့လို ရေရှည်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုမျိုးမှ မတတ်နိုင်တာ…
ကျနော် ဥာဏ်မှီသလောက်ပြောရရင် us မှာအခွန်ဆောင်ရတာ ၅၀ ရာနှုန်းကျော်
တယ်ဆိုတာက နေရာကောင်းပြီး လူစည်ကားတဲ့ နေရာမှာ ဆိုင်ဖွင့်ပြီး ဈေးရောင်းရတာ
နဲ့တူတယ်လိုမြင်မိပါတယ်။ လူလည်းမစည်ကား နေရာမကောင်း၍ ရောင်းမကောင်းတဲ့
နေရာဆိုရင် ဈေးကောင်းဘယ်ပေးနိုင်မလဲ။ စပိန်မှာ ကစားနေကြတဲ့ ဘောလုံးသမားများ
ဟာလဲ ၀င်ငွေရဲ့ ၆၀ ရာနှုန်းဝန်းကျင် လောက်အခွန်ဆောင်ရတယ်လို့ ဂျာနယ်မှာ
ဖတ်ဖူးပါတယ် ဆောင်ရမှာပေါ့ဗျာ သူတို့က လာလီဂါ ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာ အကောင်းဆုံး ဘောလုံး
လိဂ်ပြိုင်ပွဲကြီးကို ဖန်တီးပေးထားတာကို။ ၀င်ငွေလဲကောင်အောင်ဖန်တီးပေးထားတယ်
ဖန်တီးပေးတဲ့အတွက် အမြတ်ခွန် ပြန်ဆောင်ခိုင်းတယ် သဘာဝကျလှပါပေတယ်။
သိတာပေါ့ သူကြီးရယ် ။
ပြောပြီးပါပကော လေ ။
အဘ မိန်းမက ဝင်ငွေခွန် တစ်ခုတည်းထင် ၄၆.၅ % ဆောင်ရပါတယ်ဆို ။
မြန်မာပြည်ကလူတွေ သိပ်လန့်သွားမှာစိုးလို့ ၃၀ % ကနေ စပြောကြည့်တာ ။
ဖြစ်သွားတော့ လုပ်တဲ့သူမကောင်း ခံရတဲ့သူမသက်သာ မြင်ရတဲ့သူစိတ်မချမ်းသာ